‘नवौं निक इलेक्ट्रो टेक प्रदर्शनी एक लाखले अवलोकन गर्दैछन्’ - UrjaKhabar ‘नवौं निक इलेक्ट्रो टेक प्रदर्शनी एक लाखले अवलोकन गर्दैछन्’ - UrjaKhabar
‘नवौं निक इलेक्ट्रो टेक प्रदर्शनी एक लाखले अवलोकन गर्दैछन्’
पुष ०५, २०७५
शुक्रबारबाट राजधानीको भृकुटीमण्डपमा ‘निक इलेक्ट्रो टेक प्रदर्शनी, २०१८’ आयोजना हुँदैछ । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले ‘आर्थिक समृद्धिको सम्वाहक ऊर्जा’ नाराका साथ प्रदर्शनीको नवौं संस्करण आयोजना गर्न लागेको हो । स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका प्रसारण तथा वितरण सामाग्री, केबुल एवं कन्डक्टर, लाइटिङ र बहुसञ्चार उपकरणका स्टल राखिने प्रदर्शनी पुस १० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । यही सेरोफेरोमा ऊर्जा खबरकी धना ढकालले महासंघका उपाध्यक्ष तथा प्रदर्शनी संयोजक सुदर्शनप्रसाद पौड्यालसँग गरेको कुराकानीको संक्षेप :
नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ कस्तो संगठन हो ? यसले कसरी काम गरिरहेको छ ?
नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ विद्युतीय सामग्रीको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको छाता संगठन हो । यसले देशका व्यवसायीलाई संगठित गरेको छ । महासंघले विद्युत एवं विद्युतीय सामग्री उत्पादन, आयातकर्ता, बिक्रेता र उपभोक्ता समेतको हितलाई मध्यनजर गरेर गुणस्तरीय सामान उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरण गर्न सबैलाई प्रोत्साहित गर्ने गर्छ ।
‘आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा’ नारा दिएर आयोजना गर्न लागिएको इलेक्ट्रो टेक प्रचारकै लागि हो ?
आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा नै पहिलो सम्वाहक हो । ऊर्जाबाटै मुलुकले समृद्धिको बाटो समात्न सक्छ । ऊर्जाबिना विद्युतीय सामग्रीको व्यापार व्यवसाय तथा खपत हुन सक्दैन । यसो हुँदा हामीले यसको विकासमा जोड दिएका छौं । ऊर्जा विकाससँग विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन, आयात तथा खपत निर्भर हुने हुँदा यसैको व्यावसायिकता विस्तार गर्न प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको हो । दुई वर्षअघिसम्म मुलुक लोडसेडिङले आक्रान्त थियो । यो समयमा विद्युतीय सामग्रीको व्यापार व्यसाय तथा उद्योग धराशयी बनेको थियो । लोडसेडिङले विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग र व्यवसाय दुवैलाई असर गरेको थियो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । नियमित विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि सबै पक्षको सुधार हुँदै गएको छ । अबको एक–दुई वर्षमा उद्योग र व्यवसाय राम्रो भएर जाने महासंघको अपेक्षा छ ।
प्रदर्शनीको उद्देश्य के हो ?
हामीले हरेक २ वर्षमा इलेक्ट्रो टेक प्रदर्शनी आयोजना गर्दै आएका छौं । विद्युतीय सामग्री आयातकर्ता, उत्पादनकर्ता, बिक्रेता र उपभोक्तालाई एकै स्थानमा भेला गरेर गुणस्तरीय सामानबारे जानकारी दिने प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य हो । हामीले व्यापार व्यवसाय गर्ने सामग्री प्रदर्शनीमा राखिने छ । यो सम्पूर्णरूपले विद्युतीय सामग्रीको प्रदर्शनी हो । विद्युतीय सामग्रीको प्रदर्शनी र अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।
प्रदर्शनी उपभोक्ताका लागि गुणस्तरीय विद्युतीय सामग्रीको पहिचान गर्ने तथा जानकारी लिने ठाउँ बन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । स्वदेशी उत्पादनमा कुन सामग्री नेपाल गुणस्तरीय चिन्ह प्राप्तवाला छन् ? प्रदर्शनीस्थलमा आयातित सामाग्रीको गुणस्तर कस्तो छ ? कुन–कुन सामग्री कम गुणस्तरका छन् भन्ने जानकारी अवलोकनकर्ताले पाउनेछन् । साथै, विद्युतीय सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि सचेतना दिने अन्तरक्रिया राखिने छ ।
प्रदर्शनीमा कति स्टल हुनेछन् ?
प्रदर्शनीमा ७७ स्टल रहनेछन् । स्टलमा कम ऊर्जा खपत गर्ने विद्युतीय उपकरणको प्रदर्शनीलाई महत्त्व दिइने छ । साथै, विद्युतीय सुरक्षासँग सम्बन्धित सेफ्टी मेजर प्रडक्ट पनि राखिने छ । जस्तो कि विद्युतीय उपकरण जडान गर्दा करेन्ट लागेमा आफैं बन्द हुने, आगो नलाग्ने तार, स्मार्ट प्रविधिका सिसिटिभी, साइरन तथा नेपालमा उत्पादन भएका ट्रान्सफर्मर, केबल, कन्डक्टर, स्विच एवं सर्किट प्रदर्शनीका मुख्य आकर्षण हुनेछन् ।
प्रदर्शनीमा स्वदेशी उत्पादनमात्रै हुन्छन् वा आयातित सामग्री पनि राखिने छ ?
हामी सबै प्रकारका विद्युतीय उपकरण उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनेको अवस्था छैन । धेरै उपकरण अहिले पनि बाह्य मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ । लो भोल्टेज केवलमा आत्मनिर्भर छौं । विद्युतीय ट्रान्सर्फमर पनि नेपालमा उत्पादन भइरहेको छ । प्रदर्शनीमा स्वदशी तथा विदेशी एवं बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन राखिने छ ।
इलेक्ट्रो टेक प्रदर्शनीको यो नवौं संस्करणमात्र हो वा यसको आफ्नै मत्त्व छ ?
नवौं संस्करणसम्म आइपुग्दा हरेकको आ–आफ्नो उपलब्धि रहेको छ । दुई–दुई वर्षमा आयोजना हुने प्रदर्शनीले बजारमा आएका नयाँ उपकरणबारे जानकारी दिन्छ । प्रदर्शनी महासंघको सामाजिकीकरण गर्ने माध्यम पनि भएको छ ।
समयअनुसार कम विद्युत खपत गर्ने विद्युतीय उपकरण बजारमा आइरहेका छन् । यस्ता उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेमा उपभोक्ताको चेतनास्तर बढेको देखिन्छ ?
वर्तमान सूचना प्रविधिको समयमा उपभोक्ताको चेतनास्तर निकै माथि छ । हरेकमा धेरै विद्युत खपत गर्ने उपकरण प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास भएकोे छ । सोही अनुरूप हरेक घरमा पुराना विद्युतीय उपकरण फेरिएका छन् । हामीले उपभोक्ताको हित हुने गरी नै कम विद्युत खपत गर्ने उपकरणबारे बुझाउन पनि प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेका हौं ।
प्रर्दशनीमा कति अवलोकनकर्ता आउने आकलन छ ? प्रवेश शुल्क पनि राखिएको छ कि ?
५ दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा १ लाख मानिसले अवलोकन गर्ने महासंघको अनुमान छ । प्रदर्शनी हलमा प्रवेश गर्न निश्चित शुल्क निर्धारण गरेका छौं । विद्यार्थीका लागि ५० रुपैयाँ र अन्य अवलोकनकर्ताका लागि सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
यो विद्युतीय समग्री राखिने सबैभन्दा ठुलो प्रदर्शनी हो । हरेक २ वर्षमा के कस्ता नयाँ उपकरण उत्पादन भई बजारमा आए भन्नेबारे जानकारी लिन वा दिन पनि प्रदर्शनी महत्त्वपूर्ण हुने हाम्रो विश्वास छ ।